Umngundo Yijie R-99 wangaphakathi owongeziweyo Umngundo wokuKhutshwa kweAgent Series01
Ukwakhiwa: umxube wensimbi osekwe kwisepha yokujonga into yangaphandle: umbono omhlophe okanye amasuntswana Ithuba lokugcina: iminyaka emibini Iphakheji: Iphepha elidityanisiweyo lephepha lephepha lephepha Ubunzima bomzimba: 25 kg / ibhegi Uhlobo lweRubber olusebenzayo (i-NR), irabha ye-butadiene (BR ), IStyrene-Butadiene Irabha (SBR), Isoprene ngerabha (IR), Neoprene ngerabha (CR), Butyl ngerabha (IIR), EPDM, chlorosulfonated polyethylene irabha (CSM), Fluororubber (FKM), irabha zilahlwe (NBR) irabha ngokutsha inokusetyenziswa kumavili ...
Igama: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer2020 yi umnqamlezo-enxulumene polyacrylic acid copolymer. Inepropathi ende yokuhambahamba viscous, inika ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa amandla ngakumbi kwiinkqubo ezisebenza ngokukuko kunye neefom zokucaca okukhazimlayo. I-NM-Carbomer2020 inesakhono sokumanzi ngokukhawuleza kodwa i-hydrate kancinci, ingatyibiliki kwizinga eliphantsi. Eli nqaku lenza kube lula ukusasazeka kunye nempompo kunye nokuphatha kwinkqubo ngenxa yokusasazeka kwe-viscosity esezantsi ngaphambi kwe-neutralizati ...
Igama: Carbomer996 Carbopol996 Carbomer 996 Carbopol996 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo. Isetyenziswa njengesihlengahlengiso se-rheology esisebenza ngokukuko, esikwaziyo ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngomthamo ophantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kwii-O / W zokuthambisa kunye neekhrim njengearhente yokumisa efanelekileyo. Iimpawu kunye neNzuzo iipropati zokuhamba okufutshane I-viscosity ephezulu yokumisa okuphezulu, ukuqina kunye nokuzinzisa amandla Izicelo ezinconyelwayo.
Igama: ICarbomer 981 I-Carbopol 981 I-Carbomer 981 I-Carbopol981 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo. Isebenza ngokufanayo neCarbomer 941. kodwa ifakwe ipolymer kwi-co-solvent system ye-ethyl acetate kunye necyclohexane. Iimpawu kunye neziBonelelo eziGqwesileyo zokuhamba kwepropathi okukuko kusebenza ngokufanelekileyo kumgangatho ophakathi nophantsi. Ukucaca okuphezulu Izicelo ezinconyelwayo I-lotion, iikhrimu kunye neegels Cacisa iigels Iinkqubo ze-ionic ngokuphakathi Izikhokelo zeFomula Umthamo ocetyiswayo we-0.2 ~ 1.5%. Ukunga ...
Igama: ICarbomer Carbomer 980 Carbopol 980 yipolyacrylate Polymer enqamleze umnqamlezo, ipolishwe kwinkqubo yokudibanisa i-ethyl acetate kunye necyclohexane. Iyakwazi ukubonelela nge-viscosity ephezulu, ukuqina okugqwesileyo kunye nokumisa ukusebenza ngedosi ephantsi. Ukuhamba kwayo okufutshane (ukungasebenzisi-drip) iipropathi kufanelekile kwizicelo ezinje ngeegel ezicacileyo, iigels ezinotywala, iikhrimu. Xa ingathathi hlangothi ngealkali yenza amanzi aqaqambileyo okanye iigels ezinotywala kunye neekhrim. Iimpawu kunye neZibonelelo zeFlo emfutshane ...
Igama: I-Carbomer 941 I-Carbopol 941 I-Carbomer 941 I-Carbopol941 yipolyacrylate Polymer enqamleza umnqamlezo kunye nepropathi ehamba phambili ebonakalayo kwi-mucilage. Inika ukucaca okugqwesileyo kwiigel kwaye inika i-emulsions esisigxina kunye nokumiswa kwi-viscosity ephantsi, kwaneenkqubo ze-ionic. I-Carbopol941: ukuhamba ixesha elide, i-viscosity ephantsi, ukucaca okuphezulu, ukumelana ngokulinganayo kwi-ion kunye nokuxhathisa kwe-shear, efanelekileyo i-gel kunye ne-emulsion. Iimpawu kunye neziBonelelo eziGqwesileyo zokuhamba kwepropathi okukuko kusebenza ngokufanelekileyo kumodareyitha kwaye jonga ...